Homeसमाचारमनिषाले भावुक हुँदै भनिन्: मेरो बच्चा हुन्छ भन्ने सोचेर नै हतारमा विवाह गरेकी थिए तर पाठेघरकै क्यान्सर भयो (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 28, 2021 admin समाचार 2460
पनि अरु महि’ला जस्तै हो । मेरो पनि आमा बन्ने चा’हना थियो । मलाई लाग्थ्यो म पनि कुनै दिन आ’मा बन्नेछु । तर मलाई अब कहिल्यै आमा बन्न नस’क्ने बनायो । त्यो सम्झदा निकै दुख लाग्छ, यो भनाई हो अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको । उनको जिवन निकै लाभ’लाग्दो थियो । सबै उनको जस्तो जि’वन चाहन्थे । तर मनिषा’लाई नै विश्वास नै नलाग्ने रोग लाग्यो ।
सुरुमा मनिषालाई लाग्यो कतै चिकि’त्सकले गलत अनुसन्धान पो गरे की ? तर तीन पटकको परि’क्षणवाट पनि त्यही निष्कर्ष निकाले पछि मनिषालाई पाठे’घरको क्या न् सर भएको प्रष्ट भयो । बच्चालाई जन्मदिन आवश्यक पर्ने पाठेघर नै नभए’पछि अहिले मनिषाको आमा बन्ने चाहना पुरा नहुने भएको छ । आमा बन्नका लागि अन्य तरिका पनि छन् तर आफैले ९ महिना को’खमा राखेर सन्तान जन्माउने यो चाहना भने अब कहि’ल्यै पुरा नहुने भएको छ ।
मलाई लागे’को थियो मेरो बच्चा हुन्छ भनेर तर पाठेघरकै क्या न्स र हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । मलाई बच्चा जन्मा’उने ठूलो रहर थियो त्यसैले विवाह पनि गरेकी थिए, उनले यती भन्दा निकै भावुक भइन् । उमेर बढ्दै गएका का’रण आमा बन्नकै लागि आफुले हतारमा विवाहको निर्णय गरेको मनिषाको भनाई छ । २०१० देखि नै कुरा आइरहेको भएपनि उनले ह’तारमा विवाह गरेको बताइन् । त्यो उनको जिवनको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको पनि अहिले ला’गेको छ ।
विवाहको केही समय पछि उनलाई आफुले अस’हज महशुष गरेको पनि बताएकी छन् । उनले आफुले भोगेको ति कुराहरु समेटेर पुस्तक पनि निकालेकी छन् । जिजिवि’सामा उनले सबै कुरा खुलाएकी छन् । – इताजा खबरबाट
May 5, 2021 admin समाचार 3000
नेपाली चल’चित्र मा पछिल्लो समय युवा पुस्तामा अत्यन्तै रुचा’इएका नायक सलिनमान बानि’याको आज जन्म दिन परेको छ । उनी आज बाट २६ वर्षमा लागेका छन् । जन्म दिनमा उनलाई शुभ’कामना दिनेको ओइरो नै लागे’का छ
November 21, 2020 admin समाचार 6060
May 31, 2021 admin समाचार 2978
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (204142)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (202267)